မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်ကြားလိုက်တဲ့ ထူးခြားလွန်းလှသည့် မင်္ဂလာစကား…. – Real News
မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်ကြားလိုက်တဲ့ ထူးခြားလွန်းလှသည့် မင်္ဂလာစကား….
ဆရာတျောဘုရားကွီး မိနျ့ကွားလိုကျတဲ့ ထူးခွားလှနျးလှသညျ့ မင်ျဂလာစကား
မဟာဗောဓိမွိုငျဆရာတျောဘုရားကွီး ဆရာတျောကွီးက သူ့ထံ မညျသူမြှလုံးဝမလာရဟုမိနျ့ခဲ့သညျမှာ ၅ နှဈဝနျးကငျြရှိပါပွီ ဖွဈပါတယျ။
ယခုအခါ လာမညျ့တပေါငျးလမှ စ၍မငျးဘိသိကျခံလကျရှိ စတေီကိုအတောငျ ၁၈၀ ပွနျမွှငျ့ရနမိနျ့ကွားထားကွောငျး သိရှိရပါသညျ။
လှနျခဲ့သညျ့ ၂လဝနျးကငျြခနျ့ကလညျးလာမညျ့တပေါငျးပှဲ အတှကျ လားဟူ လီရှောမြား က ရနျအတှကျဇာတျစငျ ဆောကျခိုငျးထားသညျဟုအနီးကပျ တကာတဈဦးက ဖုနျးဆကျပွောပွီးဇာတျစငျဆိုတော့ ပြျောရရှငျရမဲ့ သဘောလို့သူကောကျယူကွောငျးပွောပါသညျ။
တိျု့ တောထဲဝငျတာ အလကားမဟုတျသာသနာအတှကျ ဝနေယေအြတှကျ ရဟန်တာသညျစင်ျကွာဝဠာတထောငျကို သိမျးကွုံးရိုကျဖှငျ့နိုငျ၏သာသနာအတှကျကားပွောစရာမလိုဟုဆရာတျောဘုရားကွီးမိနျ့ခဲ့ဘူးရာ တပေါငျးလကလြှေငျ တိုငျးပွညျသာသနာနှဈဖွာကောငျးပါလိမျ့မညျ
ယခုအခါ လာမညျ့တပေါငျးလမှ စ၍မငျးဘိသိကျခံလကျရှိ စတေီကိုအတောငျ ၁၈၀ ပွနျမွှငျ့ရနျမိနျ့ကွားထားကွောငျး သိရှိရပါသညျ။
တိျု့ တောထဲဝငျတာ အလကားမဟုတျသာသနာအတှကျဝနေယေအြတှကျ ရဟန်တာသညျစင်ျကွာဝဠာတထောငျကို သိမျးကွုံးရိုကျဖှငျ့နိုငျ၏သာသနာအတှကျကားပွောစရာမလိုဟုဆရာတျောဘုရားကွီးမိနျ့ခဲ့ဘူးရာ တပေါငျးလကြျောလြှငျ တိုငျးပွညျသာသနာနှဈဖွာကောငျးပါလိမျ့မညျ
ဆရာတော်ဘုရားကြီး မိန့်ကြားလိုက်တဲ့ ထူးခြားလွန်းလှသည့် မင်္ဂလာစကား
မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဆရာတော်ကြီးက သူ့ထံ မည်သူမျှလုံးဝမလာရဟုမိန့်ခဲ့သည်မှာ ၅ နှစ်ဝန်းကျင်ရှိပါပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအခါ လာမည့်တပေါင်းလမှ စ၍မင်းဘိသိက်ခံလက်ရှိ စေတီကိုအတောင် ၁၈၀ ပြန်မြှင့်ရနမိန့်ကြားထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၂လဝန်းကျင်ခန့်ကလည်းလာမည့်တပေါင်းပွဲ အတွက် လားဟူ လီရှောများ က ရန်အတွက်ဇာတ်စင် ဆောက်ခိုင်းထားသည်ဟုအနီးကပ် တကာတစ်ဦးက ဖုန်းဆက်ပြောပြီးဇာတ်စင်ဆိုတော့ ပျော်ရရွှင်ရမဲ့ သဘောလို့သူကောက်ယူကြောင်းပြောပါသည်။
တို့် တောထဲဝင်တာ အလကားမဟုတ်သာသနာအတွက် ဝေနေယျအတွက် ရဟန္တာသည်စင်္ကြာဝဠာတထောင်ကို သိမ်းကြုံးရိုက်ဖွင့်နိုင်၏သာသနာအတွက်ကားပြောစရာမလိုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်ခဲ့ဘူးရာ တပေါင်းလကျေလျှင် တိုင်းပြည်သာသနာနှစ်ဖြာကောင်းပါလိမ့်မည်
ယခုအခါ လာမည့်တပေါင်းလမှ စ၍မင်းဘိသိက်ခံလက်ရှိ စေတီကိုအတောင် ၁၈၀ ပြန်မြှင့်ရန်မိန့်ကြားထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
တို့် တောထဲဝင်တာ အလကားမဟုတ်သာသနာအတွက်ဝေနေယျအတွက် ရဟန္တာသည်စင်္ကြာဝဠာတထောင်ကို သိမ်းကြုံးရိုက်ဖွင့်နိုင်၏သာသနာအတွက်ကားပြောစရာမလိုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်ခဲ့ဘူးရာ တပေါင်းလကျော်လျှင် တိုင်းပြည်သာသနာနှစ်ဖြာကောင်းပါလိမ့်မည်
အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ၂ ငါးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးနဲ့ပက်သက်ပြီး အောင်လအန်ဆန်းသူရဲ့ ရဲရဲတောက် ရပ်တည်ချက်
ဖတ်ရင်းမျက်ရည်ကျ ရတဲ့ “` အမေပြန်လာရင်´´´